ग्लोबल क्वालीफायरमा पुग्ने स्तर नै बनेको छैनः प्रशिक्षक पटवाल (अन्तरवार्ता) | | Neplays.com
ग्लोबल क्वालीफायरमा पुग्ने स्तर नै बनेको छैनः प्रशिक्षक पटवाल (अन्तरवार्ता)
By Neplays	 Last updated Jul 29, 2019
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम सम्हालेपछि पहिलो पटक औपचारिक प्रतियोगितामा प्रशिक्षक उमेश पटवालले नराम्रो अनुभव भोगेका छन् । मलेसियाविरुद्धको टि–२० सिरिज जितेपनि टि–२० विश्वकप छनोटमा भने नेपालले नमीठो पराजय भोग्नु प¥यो ।
नेपाली टिम केही कमजोर नै देखियो । आफूभन्दा तल्लो स्तरका टिमसँग हार्दा सबैलाई नमज्जा लागेको छ । प्रशिक्ष उमेश पटवालले पनि नेपाली टिमको स्तर कमजोर बन्दै गएको बताए । यो प्रदर्शनले ग्लोबल क्वालीफायर जानु पन लज्जास्पद हुने प्रशिक्षकले बताए ।
‘क्रिकेट यस्तै हो । यो अवस्थामा हामीले राम्रो खेल्न सकेनौं । पारसले राम्रो खेल्न सकेन, सन्दिपले विकेट लिन सकेन । हामीले राम्रो टिमका रुपमा खेल्न सकेनौं,’ पटवालले भने ।
प्रशिक्षक पटवालसँग गरिएको कुराकानीः
हामीले यो प्रतियोगिता जित्छौं भन्ने आशाका साथ आएका थियौं, तर तेस्रो भयौं । के भन्नुहुन्छ ?
कहिलेकाहीँ हामी ठोस योजना नै नभईकन अलि धेरै अपेक्षा गछौं । यस्तो घटना पहिलो पटक पनि भएको होइन । यस्तो प्रदर्शनले ग्लोबल क्वालीफायरमा केही गर्न सक्दैनथ्यौं । राम्रै भयो हामी त्यहाँ जाँदैनौं । त्यसका लागि हामीले अझ धेरै तयारी गर्नुपर्छ । यतिकै गएको भए ग्लोबलमा पनि यस्तै नतिजा भोग्नु पथ्र्यो ।
नेपाल टिम नै राम्रो नभएर यस्तो भएको हो ?
नराम्रो होइन । तर, यो स्तरमा आएपछि खेलाडीले पनि आफ्नो ब्यक्तिगत प्रदर्शन सुधार गर्नुपर्छ । केटाहरुले मेहनत गरेनन् । कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ । जव तपाई प्रदर्शन नराम्रो गर्दा पनि आफुलाई राम्रो छु भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यो ठीक होइन ।
युएईमा हामीले टिमका रुपमा प्रदर्शन गरेका थियौं । त्यस्तै खेल हुन्छ भन्ने सोच्यौं, तर सँधै त्यस्तो हुँदैन ।
घरेलु संरचनामा धेरैवटा टि–२० प्रतियोगिता हुँदा पनि महत्वपूर्ण समयमा प्रदर्शन गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
हेर्न सक्नुहुन्छ, घरेलु प्रतियोगितामा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले राम्रो खेलिरहेका छैनन् । हामीसँग ‘म्याच विनर’ खेलाडी छैनन् । पहिलो म्याचमा ज्ञानेन्द्र मल्ल म्यान अफ द म्याच भए, अर्को खेलमा पारस खड्का । युएईमा पनि हामीसँग फरक फरक म्याच विनरहरु थिए । (अविनाष) बोहरा म्यान अफ द सिरिज भएको थियो ।
माथिल्लो स्तरमा खेल्दा हामीले आफैंलाई चुनौति दिन सक्नु पर्छ ।
पूरा अन्तरवार्ताका लागि:
भारत बिरुद्ध नेपाल पहिले ब्याटिङमा
इमर्जिङ एशिया कपमा नेपालकाे पहिलाे खेलमा नै अग्निपरिक्षा
भारतमा जारी अण्डर नाइन्टिन च्यालेञ्जर्समा नेपालले लगातार दोस्रो पराजय
यू–१९ च्यालेञ्जर्सः विशाल विक्रम केसीले बनाए अर्धशतक
सन्दीप लामिछाने टि–१० लिग खेल्न यूएई प्रस्थान
नेपालकाे भारत रेडसँगको खेलमा खराब प्रदर्शन